Warqadaha 3D ee loogu talagalay Android, cajiib ah! | Androidsis
ka wallpapers qabow, oo sidoo kale loo yaqaan magaceeda Ingiriisiga sida darbiyada, waa sawiradaas aan arki doonno boqollaal jeer maalintii. Sababtaas darteed waxaan badanaa ka dhigaa kombiyuutarradeygu inay beddelaan saacad kasta aaladaha mobilada waxaan ku beddelaa gacanta waqti kasta oo yar. Waxaan u adeegsan karnaa ficil ahaan wax kasta, sida 3d warqado, Taas macnaheedu maaha inay shaashadda ka tegayaan, laakiin inay yihiin nashqado u ekaysiinaya inay leeyihiin qoto-dheer.
Boggan waxaad ka heli doontaa fursado badan oo aad u wanaagsan, oo ka bilaabanaya mid gallery leh sawirro in aan ururinay waqti dheer kahor oo aan kudhameynay dhowr bog oo hubaal waxaad kaheli doontaa naqshad aad jeceshahay. Hoos waxaad ku leedahay sawirka leh sawirro aan horay uga hadlay iyo bogag internet oo aad ka heli doontid xulashooyin dheeri ah.
1 Gallery ka mid ah waraaqaha 3D-ga ah
2 Bogagga laga helo 3D-gaas
2.1 Waraaqaha HD
2.2 Wargeysyada Wide
2.3 Waraaqaha FX
2.4 HD Waraaqaha Gidaarka
2.5 Warqada Joogtada ah
Gallery ka mid ah waraaqaha 3D-ga ah
Bogagga laga helo 3D-gaas
HD Wallpapers waa degel halkaas oo aan ka heli doonno sawirro badan. Waxaa ka mid ah lacagaha ay bixiso degelkan, waana tan sababta loogu daray liiskan, waxaa jira qayb leh aan la taaban karin iyo 3D soo jeeda. Shakhsi ahaan, waxaan jeclaan lahaa in labada fikradood la kala saaro, laakiin haye, sidoo kale waa run in ay jiraan aragtiyo aad u xiiso badan oo mudan in la arko.
Waxa aan ugu jeclahay bogga websaydhka HD waa in dhanka bidix aan ku kala dooranno xulashada sida aan doonayno inay noqoto qaabka sawirka, halkaas oo aan ka dooran karno asalka aaladaha moobaylka ama HD.
Isku xirka asalka 3D hdwallpapers.in
Ficil ahaan waxkasta oo aan ka sheegnay HD Wallpapers-ka waxay ansax u yihiin Websaydhada Waaweyn. Hagaag, waxaa laga yaabaa inaanan helin ikhtiyaarka noocaas ah (inkasta oo ay tahay) inaan galo ama aan si toos ah ugu aado qaab muuqaal gaar ah, laakiin waxaan u maleynayaa buugga shabakaddan labaad, uguyaraan marka loo eego 3D, waa aad u sarreeya ah webka oo aan dhigay meesha ugu horeysa. Inkasta oo ay aniga ila tahay. Bal fiiri waad arki doontaa.
Ku xirnaanta nuxurka 3D wallpaperswide.com
Bog wax badan lagu cusbooneysiiyay oo leh waxyaabo badan, in kasta oo qaybtan la joojiyay tan iyo xagaagii ka hor, waa Waraaqaha FX. Waxay leeyihiin mid qaybta leh sooyaal badan oo 3D ah, inkasta oo qaar badan oo ka mid ahi ay yihiin sawiro dhab ah. Dabcan, xitaa sawirada dhabta ah ayaa loo sameeyay inay umuuqdaan inay kasoo baxayaan shaashadda qalabkeena. Marka la soo koobo, degel kale oo mudan in lagu xisaabtamo si lacag loogu helo android-ka yar.
Sawirro badan oo 3D ah ayaa ku jira wallpaperfx.com
HD Waraaqaha Gidaarka
Haddii waxa aad raadineyso ay yihiin sawirro aad u tiro badan oo laga yaabo inaad xitaa lumiso, waxaad raadineyso waxaa loo yaqaan 'HD Wallpaper Backgrounds'. Waa degel leh qaybo badan mid walbana wuxuu na siiyaa lacago badan. Tani waxay sidoo kale khuseysaa waraaqaha 3D, halkaas oo, tusaale ahaan, aan ku hayno qaybaha sawirrada kombiyuutarada, asalka HD, sooyaalka ubaxa, sawirrada (kuwa buluug iyo casaan ah) ama qaabab, dhammaan waxyaabaha kor ku xusan 3D.
Warqada Joogtada ah
Haddii aad u maleyneysay inaan dhameystirnay bogagga, waad khaldantay. Ikhtiyaarrada waligood ma dhaawici doonaan, WallpaperStop-na waa mid kale oo na siinaya sawirro loo kala saaray qaybo Abstract, Farshaxanka Dijital ah, Fantasy, Fractal iyo Vector. Qeybihii hore, kuwa aan ugu jeclahay ayaa ah waxa la taaban karo iyo jabka.
Wax walbana ma noqon doonaan bogag ku qoran Ingiriis, sax? Waxaan ku soo gabagabeyneynaa Fonditos, oo ah bog internet ah Isbaanish taas oo aan sidoo kale ku hayno asal 3D ah oo ay u kala sooceen qaybo, xaaladdan oo ay ka mid yihiin Xayawaanada, Muuqaallada, Astaamaha, Aalado, Gawaarida iyo Kuwa kale.
Dabcan, shaqsiyan waxaan ku siin lahaa xoogaa dhirbaaxo ah curcurka naqshadeynta websaydhka; Waxaan doorbidayaa in sawirada la arko iyadoon loo baahnayn inay galaan.